अष्ट्रेलियामा रेष्टुरेन्टमा लुट्न आएका लुटेरालाई रोक्न खोज्दा नरबहादुर खत्री घाइते - Himalayan Kangaroo
अष्ट्रेलियामा रेष्टुरेन्टमा लुट्न आएका लुटेरालाई रोक्न खोज्दा नरबहादुर खत्री घाइते
Posted by Himalayan Kangaroo | १७ मंसिर २०७५, सोमबार ०८:५६ |
मेलबर्न । अष्ट्रेलियाको मेलबर्न स्थित एक रेष्टुरेन्टमा लुट्न आएका लुटेरालाई रोक्न खोज्दा नरबहादुर खत्री घाइते भएका छन् । मेलबर्नको फ्र्यांकस्टाउनमा रहेको ईन्डियन मलमा रहेको रेष्टुरेन्टमा घटना भएको हो ।
शनिबार राती मलमा कार्यरत खत्रीले रेष्टुरेन्ट बन्द गर्दै थिए । त्यसै समयमा दुई लुटेराहरु आए र रेष्टुरेन्टमा भएको नगद लुट्ने प्रयास गरे । एक्लै रहेका नरबहादुरले उनीहरुको प्रतिकार गरे । नगद लुटेराहरुले खत्रीकै गाडी लिएर भाग्न खोजे । तर पनि उनी नडराई उनीहरुको प्रतिकार गरिरहे ।
लुटेराहरु र खत्री बीच भएको त्यो भिडन्तमा खत्रीलाई चोट लाग्यो भने एक लुटेरा फुटपाथमा चिप्लिए । चिप्लिंदा फुटपाथमा टाउको ठोक्कियो र लुटेरा बेहोस भए । खत्रीलाई हात र टाउकोमा गम्भीर चोट लागेको छ । तीन दिनको अस्पताल बसाइ पछि उनी अहिले घर फर्किएर आराम गरिरहेका छन् । घाइते लुटेराको भने मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ । प्रहरीले घटना सम्बन्धमा अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
Previousअष्ट्रेलियामा नेपाली विद्यार्थीहरुले आफूले चाहे जस्तो काम पाउन मुस्किल, यस्ता छन् कारण
Next१ रुपैयाँ किलोमा प्याज बेच्दै किसान, प्रधानमन्त्रीलाई पठाइयो पैसा
अष्ट्रेलियामा आइटी कोर्स कसरी गर्ने ? यसका फाइदाहरु के के छन् ?
२९ जेष्ठ २०७५, मंगलवार ०४:००
कक्षा ६ मै पढाई छोडेका चेपाङ युवाले बनाए हवार्इजहाज, अझ राम्रो बनाउन सहयोगको खाँचो
११ चैत्र २०७४, आईतवार १०:२७